'ओली प्रचण्ड नै भ्रष्ट्रचारी ठहरिए कारबाही हुनुपर्छ' : विजय कालिकोटे (नेकपा नेता)
'ओली प्रचण्ड नै भ्रष्ट्रचारी ठहरिए कारबाही हुनुपर्छ' : विजय कालिकोटे (नेकपा नेता) - Nepal Talk
काठमाडौ । देशमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ। सरकार पक्ष र सरकार विपक्ष बिच बेलाबेलामा चर्काचर्की नै पर्ने गरेको छ। सत्ता विपक्ष अर्थात प्रतिपक्ष राजनीतिक दलका नेताहरुबाट मात्र होईन सत्तापक्षकै शिर्ष नेताहरुबाट पनि सरकारको तीव्र आलोचना भई रहेको छ।
दुई तिहाई सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसको भन्दै तीव्र आलोचना भई रहेको छ। चुनावी समयमा नेताहरुले जनताप्रती गरेका बाचार प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसको भन्दै जनताहरु असन्तुष्टी जनाई रहेका छन् । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले जनताका गुनासाहरु सुन्न नचाहेको / नसुनेको भन्दै पछिल्लो समय जनताहरु सरकारप्रती आक्रमक ढङ्गमा नै प्रस्तुत हुने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेता देखी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु समेतको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रीलाई गालि गलोज गर्ने काम पनि भई रहेको छ।
के सरकारले साच्चै राम्रोसँग काम गर्न नसकेको हो त? वर्तमान सरकारले के गर्नु पथ्र्यो? सरकारले गरेका निर्णयहरु ठिक छन् कि छैनन् ? मन्त्रीलाई गालि गलोज गर्ने देखी लिएर सरकार र नेकपा पार्टीको बारेमा के भन्छन् त नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विजय कालिकोटे! यिनै विषयवस्तुलाई केन्द्रीत गरेर नेपालटकका लागि भुमिराज अधिकारीले नेकपा नेता विजय कालिकोटेसँग कुराकानी गरेका छन्।
रवि र ज्ञानेन्द्र शाहीले पैसा खाएर जनतालाई सडकमा उतारेका छन् (भिडियोमा हेर्नुहोस्)